Jailbreak inorambidzwa mumamiriro ekushandiswa kweApple Kadhi | IPhone nhau
Jailbreak inorambidzwa mumashandisirwo eApple Card
Tony Cortes | | Apple Pay, Jailbreak, dzakawanda
Mamiriro ekushandisa anofanirwa kugamuchirwa kuti ushandise Apple Kadhi. Ivo vanotsanangura zvakajeka iyo Jailbreak kurambidzwa pane yedu iPhone inosangana nekadhi rekubhadhara.
Goldman SachsMubatsiri waTim Cook wezvemari muchirongwa cheApple Card, akatoburitsa iyo chibvumirano nemutengi saka hapana kusahadzika nezvazvo. Muchibvumirano ichi chinoongwa kuti harizovi kadhi rechikwereti rakajairika, nekuti rinouya nemamwe mamiriro akasarudzika kubva kuApple.
Sezvinotarisirwa, mune imwe nyaya yakakosha uye yakakomba sekubhadhara nechigadzirwa, Apple ichave yakajeka uye haizobvumidze iyo iPhone kukanganiswa nayo iyo yatinogona kubhadhara nayo, tichiunza mafomu asina kupfuura kuburikidza nekutonga kwekambani. Ndiyo inozivikanwa Jailbreak, isina kukodzera iOS, yakagadziridzwa, umo matinogona kuisa mashandiro emubvunzo unokatyamadza uyo nechikonzero kana chimwe chisiri muApple Chitoro, nekudaro pasina kudzora nekambani, zvine njodzi yekuti izvi zvinosanganisira.
Chimwe chinhu chakadai chaifanira kutarisirwa, kubvira kare Apple haisati yakamboregeredza mukushandiswa kwejelebreak. Chero kunyorera kunowanikwa muApple Chitoro kwakagadziridzwa pasi peyakaomesesa mitemo yekambani, inoongorora yega yega app uye inogadziridza kuitira kuti izvi zvizadziswe. Ndicho chichemo chisingaperi chevanozvidza Apple, kutonga kwayo kwakazara uye kushomeka kwekuchinja. Ndiwo mukana wevateveri vawo, rugare rwepfungwa rwekuti chero chishandiso chaunoisa chakachengeteka.
Maitiro ekunyoresa uye kubvumidzwa kweApple Kadhi kuchaitwa kuburikidza neApple Wallet, nechibvumirano chekuti chishandiso chinoshandiswa chinofanirwa "kukodzera". Izvi zvinoita senge zvinoshanda mune yekunyoresa kadhi maitiro, zvinoreva kuti anenge achinyorera achazoda kugara neiyo iOS firmware. Izvi zvinoreva kuti maitiro ekunyoresa anozoona kuti iyo firmware yeiyo iPhone ndiyo yekutanga. Kana zvisiri, hazvizombo gadza. Kana iwe ukauya nezano rakakura rekutanga kuisa Apple Card uyezve jailbreak, kuwana kwako Apple Card kunogona kurambwa chero nguva uye pasina ziviso yapamberi.
Mamiriro ekushandisa zvakare anorambidza vanyoreri veApple Card kubva pakushandisa sevhisi kutenga kufambiswa kwemari, ndiko kuti, kutenga matikiti erotari, kubhejera, machipisi mukasino, kana kunyange mari yemadhora, senge BitCoin kana Ethereum. Ichi hachisi chinhu chitsva. Kune nyika dzakawanda pasi rose uko rudzi urwu rwekutenga kadhi rechikwereti rwakarambidzwa.
Pakutanga Apple Card ichave ichiwanikwa pakupera kwaNyamavhuvhu, sezvakasimbiswa naTim Cook.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Jailbreak inorambidzwa mumashandisirwo eApple Card
Imwe mimhanzi inowana mukurumbira paApple Music ine new ALT CTRL playlist